Kedu otu Nchịkọta Njedebe Na-enyere Aka Azụmaahịa | Martech Zone
Nchịkọta njedebe na-abụghị naanị akụkọ na eserese mara mma. Ikike ịgbaso ụzọ nke onye ahịa ọ bụla, site na mbido mbụ na ịzụrụ ihe oge niile, nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka belata ọnụahịa nke ọwa mgbasa ozi na-adịghị arụ ọrụ ma baa ụba, bulie ROI, ma chọpụta etu ọnụnọ ha n'ịntanetị si emetụta ahịa na-adịghị n'ịntanetị. OWOX BI ndị nyocha achịkọtala ihe ọmụmụ ise na-egosi na nchịkọta dị elu na-enyere ụlọ ọrụ aka ịga nke ọma ma baa uru.
Iji nchịkọta Njedebe na Ọgwụgwụ Inyocha Onyinye N'ịntanetị
Ọnọdụ. Otu ụlọ ọrụ emeghewo ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa anụ ahụ. Ndị ahịa nwere ike ịzụta ngwongwo ozugbo na weebụsaịtị ụlọ ọrụ ma ọ bụ lelee ha n'ịntanetị wee bịa n'ụlọ ahịa anụ ahụ ịzụta. Onye nwe ya atụlewo ego ha nwetara site na ntanetị na ntanetị na-enweghị ntanetị wee kwubie na ụlọ ahịa anụ ahụ na-eweta ọtụtụ uru karịa.
Goolu ahụ. Kpebie ma ị ga-alaghachi azụ ahịa ịntanetị ma lekwasị anya na ụlọ ahịa anụ ahụ.
Ihe ngwọta dị irè. Companylọ ọrụ ụlọ ahịaDarjeeling Mụọ mmetụta ROPO - mmetụta nke ọnụnọ ya n'ịntanetị na ahịa ya na-adịghị n'ịntanetị. Ndị ọkachamara Darjeeling kwubiri na 40% nke ndị ahịa gara na saịtị ahụ tupu ịzụrụ na ụlọ ahịa. N'ihi ya, na-enweghị ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ihe ha zụtara agaghị eme.
Iji nweta ozi a, ụlọ ọrụ ahụ dabere na sistemụ abụọ maka ịnakọta, ịchekwa na nhazi data:
Nchịkọta Google maka ozi gbasara omume ndị ọrụ na weebụsaịtị
CRM nke ụlọ ọrụ ahụ maka ọnụahịa na ịkwụ ụgwọ data
Ndị ahịa Darjeeling jikọtara data sitere na sistemụ ndị a, nke nwere akụkụ dị iche iche na mgbagha. Iji mepụta akụkọ na-emekọ ihe ọnụ, Darjeeling ji usoro BI mee maka nyocha nyocha na njedebe.
Iji nchịkọta njedebe na njedebe iji nwetaghachi nkwụghachi na ntinye ego
Ọnọdụ. Azụmaahịa na-eji ọtụtụ ọwa mgbasa ozi iji dọta ndị ahịa, gụnyere ọchụchọ, mgbasa ozi gbara gburugburu, netwọkụ mmekọrịta, na telivishọn. Ha niile dị iche na ego na arụmọrụ ha.
Goolu ahụ. Zere mgbasa ozi na-adịghị arụ ọrụ ma dị oke ọnụ ma jiri naanị mgbasa ozi dị irè ma dị ọnụ ala. Enwere ike ime nke a site na iji nchịkọta njedebe na-atụle ọnụahịa nke ọwa ọ bụla na uru ọ na-eweta.
Ihe ngwọta dị irè. NaDọkịta Ryadom lọ ọgwụ ahụike, ndị ọrịa nwere ike soro ndị dọkịta na-emekọrịta ihe site na ọwa dị iche iche: na weebụsaịtị, site na ekwentị, ma ọ bụ na nnabata. Ngwaọrụ nchịkọta weebụ mgbe niile ezughi iji chọpụta ebe onye ọbịa ọ bụla si, n'agbanyeghị, ebe anakọtara data na sistemụ dị iche iche na enweghị njikọ. Ndị nyocha ahụ nwere ike ijikọ data ndị a n'ime otu usoro:
Data gbasara omume onye ọrụ site na nchịkọta Google
Kpọọ data site na sistemụ nsuso oku
Data na mmefu sitere na isi mgbasa ozi niile
Ihe omuma banyere ndi oria, ntinye, na nnata site na sistemu nke ulo ogwu
Akụkọ ndị dabere na data mkpokọta gosipụtara nke ọwa anaghị akwụ ụgwọ. Nke a nyeere ụlọ ọgwụ aka ịkwalite mgbasa ozi ha. Dịka ọmụmaatụ, na mgbasa ozi gburugburu ebe obibi, ndị na-ere ahịa hapụrụ naanị mkpọsa na ntụgharị asụsụ ka mma ma bawanye ego maka geoservices. N'ihi nke a, Dọkịta Ryadom mụbara ROI nke ọwa ọ bụla site na oge 2.5 ma belata ọnụ ahịa mgbasa ozi na ọkara.
Iji nchịkọta njedebe na njedebe iji chọta mpaghara o f Uto
Ọnọdụ. Tupu imalite ihe, ikwesiri ịchọpụta ihe anaghị arụ ọrụ ọfụma. Dịka ọmụmaatụ, ikekwe ọnụọgụ mkpọsa na ahịrịokwu ọchụchọ na mgbasa ozi gbara gburugburu agbatịola ngwa ngwa nke na ọ gaghị ekwe omume iji aka gị jikwaa ha. Yabụ ị kpebie iji aka gị mee njikwa ego. Iji mee nke a, ịkwesịrị ịghọta ịdị irè nke nke ọ bụla n'ime ọtụtụ puku ahịrịokwu ahịrịokwu. A sị ka e kwuwe, na nyocha na-ezighi ezi, ịnwere ike ijikọ mmefu ego gị maka ihe ọ bụla ma ọ bụ dọta ndị ahịa ole na ole.
Goolu ahụ. Nyochaa arụmọrụ nke isiokwu ọ bụla maka ọtụtụ puku ajụjụ ọchụchọ. Wepu mmefu na-efu na obere nnweta n'ihi nyocha na-ezighi ezi.
Ihe ngwọta dị irè. Iji gbanye njikwa nchịkwa,Egwu, Onye na-ere ahịa hypermarket nke arịa na arịa ụlọ, jikọtara oge niile ndị ọrụ. Nke a nyeere ha aka soro oku ekwentị, nleta ụlọ ahịa, na kọntaktị ọ bụla na saịtị ahụ site na ngwaọrụ ọ bụla.
Mgbe ha jikọtara data a niile ma debe nyocha njedebe ruo na njedebe, ndị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ malitere itinye njiri mara - nkesa uru. Site na ndabara, Google Analytics na-eji nke ikpeazụ anọ pịa àgwà nlereanya. Mana nke a na-eleghara nleta anya, na ọwa ikpeazụ na nnọkọ na njikọta mmekọrịta na-enweta uru zuru oke nke ntụgharị.
Iji nweta data ziri ezi, ndị ọkachamara Hoff guzobere njiri mara maka olulu. A na-ekesa uru ntụgharị na ya n'etiti ọwa niile na-esonye na ọkwa ọ bụla nke olulu ahụ. Mgbe ha na-amụ data jikọtara ọnụ, ha tụlere uru nke isiokwu nke ọ bụla wee hụ nke na-adịghị arụ ọrụ na nke wetara ọtụtụ iwu.
Ndị nyocha Hoff setịpụrụ ozi a ka emelitere kwa ụbọchị ma bufee ya na sistemụ njikwa njikwa akpaaka. A na-agbanwezi ọnụahịa wee mee ka nha ha dabara na ROI nke isiokwu ahụ. N'ihi ya, Hoff mụbara ROI ya maka mgbasa ozi gburugburu ya site na 17% ma jiri ọnụọgụ abụọ nke mkpụrụokwu dị irè.
Iji Nchịkọta Njedebe na Ọkpụkpọ iji Hazie Nkwukọrịta
Ọnọdụ. Na azụmaahịa ọ bụla, ọ dị mkpa iwulite mmekọrịta gị na ndị ahịa iji nye onyinye dị mkpa yana soro usoro mgbanwe na iguzosi ike n'ihe. N’ezie, mgbe ọtụtụ puku ndị ahịa bịara, ọ gaghị ekwe omume ịnye onye ọ bụla n’ime ha ihe ị chọrọ. Mana inwere ike kewaa ha n’ime otutu uzo ma wulite mkparita uka n’otu n’ime ngalaba ndia.
Goolu ahụ. Kewaa ndị ahịa niile n'ọtụtụ ngalaba wee wuo nkwukọrịta na ngalaba ndị a.
Azịza bara uru. NaButik, Nnukwu ụlọ ahịa dị na Moscow nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị maka uwe, akpụkpọ ụkwụ, na ngwa, meziwanye ọrụ ha na ndị ahịa. Iji mee ka ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na uru ndụ ha niile, ndị ahịa Butik ahaziri ahazi nkwukọrịta site na ebe oku, email, na ozi SMS.
E kewara ndị ahịa na ngalaba dabere na ọrụ ịzụrụ ha. Ihe si na ya gbasaa bụ n'ihi na ndị ahịa nwere ike ịzụta n'ịntanetị, nye iwu na ịntanetị ma bulie ngwaahịa na ụlọ ahịa anụ ahụ, ma ọ bụ jiri saịtị ahụ ma ọlị. N'ihi nke a, a chịkọtara ma chekwaa data ahụ na Google Analytics na akụkụ ọzọ na usoro CRM.
Mgbe ahụ ndị ahịa Butik mara ndị ahịa ọ bụla na ihe niile ha zụtara. Dabere na ozi a, ha kpebiri ngalaba kwesịrị ekwesị: ndị na-azụ ahịa ọhụrụ, ndị ahịa na-azụta otu ụzọ n'ụzọ anọ ma ọ bụ otu ugboro n'afọ, ndị ahịa oge niile, wdg. Na ngụkọta, ha chọpụtara ngalaba isii ma kpụọ iwu maka ịgbanye na-akpaghị aka site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ. Nke a mere ka ndị ahịa Butik wulite nkwukọrịta ahaziri iche na ngalaba ndị ahịa ọ bụla ma gosi ha ozi mgbasa ozi dị iche.
Iji nchịkọta nyocha na njedebe iji chọpụta mkpebi aghụghọ na mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ (CPA)
Ọnọdụ. Otu ụlọ ọrụ na-eji usoro akwụ ụgwọ-eme ihe maka mgbasa ozi n'ịntanetị. Ọ na-etinye mgbasa ozi ma na-akwụ ụgwọ nyiwe naanị ma ọ bụrụ na ndị ọbịa na-eme ihe ezubere iche dị ka ịga na weebụsaịtị ha, debanye aha, ma ọ bụ zụta ngwaahịa. Mana ndị mmekọ na-etinye mgbasa ozi anaghị arụ ọrụ n’eziokwu mgbe niile; e nwere ndị wayo n’etiti ha. Ọtụtụ mgbe, ndị aghụghọ a na-edochi isi iyi okporo ụzọ n'ụzọ ọ dị ka ọ dị ka netwọk ha eduga na ntughari. Enweghị nchịkọta pụrụ iche na-enye gị ohere ịgbaso usoro ọ bụla n'ahịa ahụ wee hụ ebe isi mmalite si arụpụta ya, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịchọpụta ụdị aghụghọ a.
Bank nke Raiffeisen e nwere nsogbu na wayo ahia. Ndị na-ere ahịa ha achọpụtala na ọnụ ahịa ndị mmekọ agbakwunyere ebe ego ha ka dị, yabụ ha kpebiri iji nlezianya lelee ọrụ ndị mmekọ.
Goolu ahụ. Chọpụta aghụghọ site na iji nyocha njedebe. Sochie usoro ọ bụla n'ahịa ahịa ma ghọta nke isi mmalite na-emetụta omume ndị ahịa ezubere iche.
Azịza bara uru. Iji lelee ọrụ nke ndị mmekọ ha, ndị ahịa na Raiffeisen Bank chịkọtara data ezughị oke nke omume ndị ọrụ na saịtị ahụ: ozi zuru ezu, enweghị usoro, na enweghị nyocha. N'etiti ndị ahịa niile nwere ọwa mgbakwunye ọhụrụ, ha họọrọ ndị nwere obere oge ezumike n'etiti nnọkọ. Ha chọpụtara na n’oge ezumike ndị a, agbanwere ebe a na-enweta okporo ụzọ.
N'ihi nke a, ndị nyocha Raiffeisen hụrụ ọtụtụ ndị mmekọ na-etinye azụmaahịa mba ofesi ma na-ebugharị ya na ụlọ akụ. N’ihi ya, ha kwụsịrị iso ndị a na-emekọ ihe na-emefusị ego ha.
Anyị emeela ka ọ pụta ìhè nsogbu ịma aka ndị ahịa kachasị na usoro nyocha ga-akwụsị. Na omume, site na enyemaka nke data agbakwunyere na omume onye ọrụ ma na weebụsaịtị yana offline, ozi sitere na sistemụ mgbasa ozi, na ịkpọ oku data, ị nwere ike ịchọta azịza nye ọtụtụ ajụjụ gbasara otu esi emeziwanye azụmahịa gị.
Tags: Attributionụgwọ kwa omumedọkịta ryadomakwụsị-na-ọgwụgwụnjedebe na njedebeowox bi